မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Free & Easy Korea Day 1 (Part 2): Busan (Gamcheon Culture Village -> Jalgachi Fish Market)
Posted by mabaydar at 11:22 PM
ဝါးးး ဗိုက်ဆာနေတုန်းဖတ်မိတယ် ငါးကင်စားချင်လိုက်တာကွယ် ဟိုတာလပတ်မိုးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ဆိုဂျူးနဲ့အကင်တွေဝင်တွယ်လို့ရလားဟင် .. အာ့တွေဒရာမာတွေထဲမြင်မြင်နေလို့ ချဉ်ချင်းတပ်ရတာလဲကြာပါဘီ..ဟိုရွာလေးကလဲလှလိုက်တာ.. အိမ်ကြိုအိမ်ကြားဖြတ်လမ်းကလဲလှတယ်တော့ .. ဝိုင်းက ဟိုတခါပြောသလိုအမြင့်ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူး အဆင်းကြောက်တာ အဆင်းကို ၃ပေလောက်မြင့်လဲကြောက်တယ် အဲလိုလှေကားလေးနဲ့ဘေးကလက်တန်းပါရင်တော့ဆင်းတယ် အရေးထဲမှာသူကလူကို Park Hoon နဲ့ဆွဲဆောင်နေသေးတယ် ဝါးးးး အာဂျီးရှိက ဟွန်းနဲတူလားဟင်.. အဲ့ရွာကိုအပေါ်စီးကရိုက်ပြတော့ ပြီးတော့လှေကားလိုအိမ်တွေကအနိမ့်အမြင့်နဲ့လို့ပြောတော့ ဝိုင်းက ဟိုဒရာမာတွေထဲပြပြနေတဲ့ အိမ်စုတ်လေးတွေထင်တာ လှေကားထစ်တွေနဲ့လေ မင်းသမီးက ဇာတ်နာရင်အဲ့မှာနေတာတို့ဘာတို့ အဲလိုထင်တာ တကယ်ကျတော့သူက သပ်ရပ်လှပနေတာပဲ အေးလေ tourist attraction မဖြစ်ခင်က အဲလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်. ..နောက်နှစ်ကျ ကိုရီးယားသွားလည်ရင်ကောင်းမလား အစားနဲ့Park Hoon ဖတ်လိုက်ရလို့ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး
7/29/2014 12:07 AM
ဒီလောက်အပင်ပန်းခံနိုင်ကျတာကိုချီးကျူးးပါတယ်။ညစာစစားတာတောင်၈ခွဲလောက်ရှိပြီဆိုတော့ Nampo မှာလျှောက်တာနဲ့တော်တော်မိုးချုပ်ရောပေါ့။သတ္တိတွေကိုလဲချီးကျူးးပါတယ်။
ဟုတ်တယ် ကိုရီးယားမှာ နေခဲ့တဲ့ ရက်တွေတိုင်း ဟော်တယ်ကို အစောဆုံးပြန်ရောက်တဲ့နေ့က ည ၁၀နာရီပဲ... နောက်အကျဆုံးပြန်ရောက်တဲ့နေ့က ည ၃နာရီ... ဟီး... Nampo မှာ လူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်... လူသိပ်မပြတ်တော့ မကြောက်ဘူး.. မျက်ကန်း တစေမကြောက်ဆိုသလိုဖြစ်နေမလားတော့ မသိဘူး... ဟီး... ဒီခရီးကို ထွက်လာမှတော့ သတ္တိက ရှိရမယ်လေ... ကြောက်တတ်ရင် ခရီးမထွက်တော့ဘူးပေါ့.... :D ... comment အတွက် ကျေးဇူးနော်... အမည်မသိစာဖတ်သူရေ...
7/29/2014 12:49 AM
Wine ရေ... သွားသာသွား... :D
7/29/2014 12:51 AM
မဗေဒါကိုတကယ်ချီးကျူးတယ်..။ သွားရဲလာရဲတဲ့အပြင် ထောင့်စေ့အောင်မြင်တတ်တယ်..သွားတတ်တယ်..။ အဲလိုမျိူးသွားချင်ပေမယ့်လေ...သတ္တိမရှိဘူး.. အုပ်စုတောင့်ရင်တော့နောက်ကလိုက်ချင်သား..။ နောက်ပိုစ့်တွေလည်းမျှော်နေပါတယ်ဗျို့ ။
Gemcheon Culture Village ကို ကိုရီးယားသွားလည်ရတာကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် Facebook မှာ ဓတ်ပုံတင်ထားတာတွေ့ကထဲက အတော်လှတာ သတိထားမိတယ်။ အသေးစိတ်လမ်းတွေကတော့ အခု မဗေဒါ ဓတ်ပုံတင်ထားတာတွေ့မှ အတော်များတာ သိတော့တယ်။ Fish Market က ကြည့်ရတာကိုယ့်အတွက်တော့ သရေယိုချင်စရာ ပဲ။ ကိုယ်က အစိမ်းရော အကျက်ရော အကုန်စားတယ်(ကြော်ငြာဝင်) ။ ဟီး။ သူတို့ဟိုကလူတွေ လမ်းအတော်လျှောက်နိုင်/လျှာက်ရ တယ် ထင်တယ်။ နေရာတော်တော်များများက လမ်းလျှောက်ရတာချည်းပဲလိုဘဲ။ ကိုယ်တော့ ဟိုရောက်မှ ဖိနပ် ခိုင်ခိုင် တရံလောက်ဝယ်မယ်စဉ်းစားတယ်။ SG မှာဝယ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Flat shoe တွေက ၂လလောက်နဲ့ ပျက်သွားတာများတယ်။ လမ်းလျှောက်ရတာကြိုက်တော့ ဖိနပ်ပိုပွန်းတယ်။ ဟိုက Shoe တွေ Comfortable ဖြစ်ပြီး ပိုခံလားဟင်?? ကိုရီးယားက လမ်းပြဆိုင်းဘုတ်တွေက SG လို ကောင်းလားဟင်? ဆက်ရေးပါနော်။ စောင့်နေမယ်။ :)
ညီမရေ ..အားလဲကျတယ် ...ခရီးသွားပို့(စ်)လေးတွေကို အသေးစိတ်လေးရေးပြထားတာ သဘောကျတယ်ကွယ်.
အားရပါးရ ဖတ်သွားတယ် အစ်မရေ ထောင့်စေ့အောင်ရေးထားတာ မိုက်တယ်. ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင်သွားနေရသလိုပဲ
နဲနဲတော့လန့်တယ် ကွကိုသွားဖို့။ သေချာလေ့လာပီးမှကိုသွားရမယ်။အသေးစိတ်ရေးပြထားတာအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေကိုအစဉ်အမြဲစောင့်မျှော်လျှက်။
မဗေဒါထက် ထောင့်စေ့တာ မဗေဒါ သူငယ်ချင်း... သူက တစ်ခုခုဆို Confirm လိုက်ရမှ ကျေနပ်တာ... ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ မကြာသင့်ပဲ ကြာသွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာပေါ့... ဘာပဲပြောပြော ထောင့်စေ့တြ့သူက ကောင်းပါတယ်... မဗေဒါက ဂျပန်မှာတောင် တစ်ယောက်တည်း လျှောက်သွားခဲ့ပြီးကတည်းက သိပ်မကြောက်တော့ဘူး... လက်ပျေယက်တယ်ဆိုတာ တကယ့် ခရီးသွားကောင်းတစ်ယောက်မှာ မရှိဘူး... တစ်ခုပဲ Safety တော့ နည်းနည်းကြောက်တာပေါ့... ဒါပေမဲ့ ဒါကလဲ အစကတည်းက အန္တရယ်ရှိမဲ့နေရာတွေ ရှောင်သွားရင် ဖြစ်ပါတယ်... အဖော်ကောင်းတွေနဲ့ ခရီးသွားဖြစ်ပါစေနော်... နောက်ပိုစ့်လဲ ကွန်မန့် မျှော်နေမယ်...
8/02/2014 4:19 PM
ကိုရီးယားမှာ MyeongDong အထွက်က underground shopping mall လိုမျိုးက ဖိနပ်ဆိုင်တွေမှာတော့ flat ထက် ဒေါက်မြင့်တွေတွေ့တာများတယ်... MyeongDong က လမ်းဘေးလှည်းဆိုင်လိုမျိုးမှာ ခုခေတ်စားနေတဲ့ အုန်းဆံလိုလို အုန်းသားလိုလို အညိုရောင် ကြိုးသိုင်း Flat ဖိနပ်လေးဝယ်မလို့မေးတာ... ၂သောင်းခွဲ ဆိုတော့ စလုံး ၃၀ လောက်ရှိမှာပေါ့... စလုံးထက် ဈေးများတယ်ထင်တာနဲ့ မ၀ယ်ခဲ့ဘူး... ဈေးဆစ်လို့တော့ ရမှာပေါ့... ပြီးတော့ ဒီဇိုင်းက စလုံးထက်တော့ လှတယ်.. ဒါပေမဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်မှာ စလုံး ၃၀ ဆိုတော့ စလုံးက ပိုသက်သာတယ်ထင်တာပဲ... ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယား လမ်းဘေးဆိုင်က ပစ္စည်းလေးတွေက quality တော့ မဆိုးပါဘူး... လမ်းပြဆိုင်းဘုတ်ကတော့ ရထားဘူတာရုံမှာ သေသေချာချာကြည့်သင့်တယ်... သူက စလုံးလို့ ရထားမှားစီးလို့ ဟိုဘက် ပလက်ဖောင်းပြန်စီးလို့မရဘူး... ဆင်းမိတဲ့ ပလက်ဖောင်းမှားတာနဲ့ ပြန်တက်ပြီး အမှန်ပလက်ဖောင်းကို သွားရတယ်... စလုံးလောက်တော့ လမ်းပြဆိုင်းဘုတ်က သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့... ဒီလိုပဲ မေးမြန်းပြီး သွားရင်တော့ ဖြစ်ပါတယ်...
ဟုတ်... လာဖတ်သွားပြီး ခြေရာချန်ခဲ့ပေးတာ ကျေးဇူးအစ်မ... hope to see you again... :D
8/02/2014 4:26 PM
အမြဲဖတ်ပြီး အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် ညီမရေ...
8/02/2014 4:27 PM
မလန့်ပါနဲ့... Safe ဖြစ်ပါတယ်... ကိုယ်သာ သာမာန် သတိ အသိနဲ့ နေပေါ့... မသွားခင်တော့ သေချာ လေ့လာသွားတာ မမှားဘူးပေါ့... ခုလို အားပေးနေတဲ့ သူတွေရှိတော့ ရေးရတာ အားရှိပါတယ်... ကျေးဇူးပါ...
8/02/2014 4:28 PM
8/05/2014 1:42 PM
ခရီးသွားရင် အဲလို Free & Easy ပဲသွားချင်တာ ။ အားကျပါဘိ
8/10/2014 9:37 AM